China Cyromazine Mmebi Na-egbu Ijiji na ndị na-emepụta ngwaahịa | Senton
Ezigbo Hesperidin Methyl Chalcone
Ogwu Cyromazine Na-egbu Onwe
Aha ngwaahịa Cyromazine
Chemical usoro C6H10N6
Oke molar 166,19 g / mol
Ebe mgbaze 219 ruo 222 ° C (426 ruo 432 ° F; 492 ruo 495 K)
CAS Mba 66215-27-8
Cyromazine e jiri otutu nsi egbu ijiji. Ọ bụ White Powder. O nwere ihe ndi n’enye nsogbu nke n’eme dika ihe nile megide larvae nile, ya mere odi ya Nnukwu na Ogbu mmadu.Ọ dị mfe iji,enweghị nsi megide mammil, na bụ mmiri soluble granular larvicide nke nwere ike fesa na slurry ma ọ bụ fesa ya mgbe etinyere ya na mmiri. Usoro ọgwụgwọ a na - akwụsị larvae na - emepe emepe nke na - emechi usoro ijiji wee kwụsị. Ngwakọta Maggots na-enye mmetụ dị ogologo oge ma dịkwa mma iji gburugburu anụ ụlọ. Nke a bụ mmetụtaOrganic Pest Njikwa.
Ngwaahịa a bụ ahụhụ pụrụ iche uto na-achịkwa reagent. Ọ nwere ike dị ka nri mmako, nke nwere ike n'ụzọ dị irè na-akwụsị nkịtị uto nke ụmụ ahụhụ si ya nwa ahuhu stage.Because nke ọrụ usoro nke ya nọ n'ọrụ akụrụngwa bụ ukwuu nhọrọ, o nwere ike ọ gaghị eme ihe ọjọọ ọ bụla bara uru ụmụ ahụhụ ma pests ka ada. A ga - eji ụdị ugbo ọ bụla dị ka mgbakwunye nri iji chịkwaa uto ahụ. Ọ nwere njirimara nke arụmọrụ, nchekwa, enweghị nsị, adịghị emerụ gburugburu ebe obibi, ọ nweghịkwa mgbochi ọgwụ na ọgwụ ndị ọzọ. ọ nwere ike ịchịkwa ya n'ụzọ dị irè megide nsogbu ndị na-eguzogide ọgwụ.Companylọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na mba ofesi na Shijiazhuang. Mgbe anyị na-arụ ọrụ ngwaahịa a, ụlọ ọrụ anyị ka na-arụ ọrụ na ngwaahịa ndị ọzọ, dị ka White Azamethiphos Ntụ ntụ, Mkpụrụ Osisi Nnukwu Ogo Ahụhụ, Ngwa-nrụpụta Ọgwụ ahụhụ Cypermethrin, Yachapu Clear Methoprene Liquid and na na.Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-enye gị ngwaahịa na ọrụ dị mma.
Na-achọ ezigbo Cyromazine iji gbuo Flies Manufacturer & soplaya? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. All White ntụ ntụRomụ ahụhụ Cyromazinena-obi ike mma. Anyị bụ ndị China Mmalite Factory nke Ọma Organic Pest Control. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Cyromazine Na okuko
Cyromazine na-eji na okuko
Romụ ahụhụ Cyromazine
Veterinary Na Ahụhụ Uto Regulator
Irè Agrochemical ahụhụ Pesticide Cy ...
Ntụ ntụ na-acha ọcha iji chịkwaa ijiji Cyromazine
Cyromazine Dị ka semụ Ahụ Ọchịchị Na-ahụ Maka Ahụhụ
Akwa Ogologo Ji Cyromazine Ji Eji Mee Ihe